Lungiselela Ukuchitha Kwakho I-Webinar: I-Webinar ROI Calculator | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 26, 2014 NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 UJenn Lisak Golding
Ubuwazi ukuthi, ngokwesilinganiso, Abakhangisi be-B2B basebenzisa amaqhinga wokuthengisa ayi-13 ahlukene ngezinhlangano zabo? Angazi ngawe, kepha lokho kungiphatha ikhanda ngicabanga nje ngakho. Kodwa-ke, lapho ngicabanga ngakho impela, sisiza amaklayenti ethu ukuthi athumele ngamasu amaningi njalo ngonyaka futhi lelo nani likhuphuka kuphela njengoba abasebenzeli begcwala kakhulu. Njengabakhangisi, kufanele sibeke phambili ukuthi sizosisebenzisa nini futhi kuphi isikhathi sethu noma singeke senze lutho!
Cishe onyakeni owedlule, saqala ukusebenza neReadyTalk, a ipulatifomu yesoftware yewebhu, futhi sathumela uchungechunge lwethu lwe-webinar ukubona ukuthi iyini impikiswano. Senze ukuhola okungaphezulu kwama-600 phakathi kwama-webinars ama-3 wabalingani bethu, futhi cishe ama-25 - 30% wabo aphenduka imikhondo efanelekile. Ngokusobala, ama-webinars abe ngesinye sezincomo zethu eziphezulu zamasu wokumaketha e-2014.
Ngokufunda okwengeziwe ekukhuthazeni i-webinar, funda i-athikili yami ngamathiphu wokukhuthaza iwebhu, Amathiphu ayi-10 Wokukhuthaza I-Webinar Yakho Elandelayo.
Lapho sibeka phambili imikhankaso yezokumaketha namakhasimende ethu, sihlala sibheke i-ROI yemizamo yethu nokuthi yikuphi okuzoholela ekuguqulweni okwengeziwe. Ngenkathi sibona ukuguqulwa ngama-webinars, besifuna nokubala i-ROI. Yilapho-ke lapho sithathe isinqumo sokuhlangana neReadyTalk futhi sakhe umshini wokubala ohlinzeka ngalokho nje: ukubalwa ku-webinar ROI.
Noma ngabe uke wasebenzisa ama-webinars esikhathini esedlule noma usaqala, ungasebenzisa lesi sibali ukwenza lokhu:
Khomba ukuthi uhlelo lwakho lwe-webinar luyini / luzokubiza ini,
Thola izincomo ze-ROI engcono,
Qhathanisa izindleko ezigabeni zonke, futhi
Thola ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-webinars yenhlangano yakho.
Thola i-webinar ROI yakho manje:
Sebenzisa i-ReadyTalk's ROI Calculator
Ukudalula: IlungileTalk wayeyiklayenti lethu futhi engumxhasi we Martech Zone.
Tags: Ukumaketha iWebinarReadyTalk wokubalaukubalwa kwe-roiumshini wokubala we-roiingqungquthela yewebhuumhlangano wewebhuumhlangano wewebhuiwebhu webinar
Nakhu ukuthi ukhiqiza kanjani ukuhola okuningi nge-Social Media